Ungalitshintsha njani igama lomsebenzisi kwiTikTok? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Meyi 6, 2021 0 IiCententarios 406
I-TikTok sisiqalo sokonwaba kubasebenzisi abaninzi be-Intanethi, okwangoku yenye yezona ndawo zisetyenziswa kakhulu kwezonxibelelwano. Le ntanethi yenethiwekhi yahluke kancinci kwamanye amaqonga, kuba ngokucacileyo ifomathi yeevidiyo zenzelwe ukuba abasebenzisi basebenzisane ngokuthe ngqo nabani na ohlela umxholo.
Ukudala umdla kubantu beli qonga kufuna ubuchule kunye nobuchule. Ngaphandle kwamathandabuzo, iTikTok iyeyona nethiwekhi ithandwayo kwi2020 kunye ne2021, zininzi iividiyo ezihamba zintsholongwane yonke imihla ngexesha elifutshane enkosi kule nethiwekhi kunye nabasebenzisi abayinxalenye yayo. Kukho ithuba lokuba abo baqala kule nethiwekhi bakhethe igama lomsebenzisi abangalithandiyo, kodwa oku kunesisombululo.
Utshintsha njani igama lephrofayili kwiTikTok
Njengoko bekutshiwo, amaxesha amaninzi abantu xa bengena kwiinethiwekhi ezintsha zentlalontle abahlali banike ukubaluleka kwamagama abasebenzisi. Ngaphandle kokwazi ukuba yintoni Nantsi ke le nto ibachazayo ebanika yona kwaye kubaluleke kakhulu ukuba babenento eyakhiwe kakuhle ukuze abanye abantu bafumane ngokulula kwi-intanethi.
Ukuba le yimeko kwaye ngubani onomsebenzisi ongabathandiyo, uninzi lwentlalo zivumela ukwenza utshintsho ukuze zikhululeke ngokuchongwa. I-TikTok, inolu khetho ngokwemveli kunye nokwenza inkqubo akukho mfuneko yokwenza njalo.
Eyona nto ifunekayo yile unesixhobo esiphathwayo esifakelwe usetyenziso, ukusukela kwiwebhu awukwazi ukukhetha oku kunye nezinye iindlela onokukhetha kuzo. Kuyo nayiphi na imeko, akukho mfuneko yokuba ukhathazeke, izikhombisi eziza kulandelwa zilula kakhulu kwaye ziya kushiyeka ngezantsi.
Imiyalelo emayilandelwe ukwenza utshintsho lomsebenzisi kwiTikTok
Kwindawo yokuqala, kuya kufuneka ufake isicelo, nokuba yeyiphi na inkqubo ephatha isixhobo, inkqubo iya kuba njalo. Uyenzile le, kuya kufuneka uye kwiprofayile okanye ucofe i icon echongwe njengo "me", emi emazantsi kwesikrini.
Oku kuyakuvelisa iscreen esiza kubonisa ulwazi lweakhawunti apho uza kubona icandelo elinegama; "hlengahlengisa iprofayile yakho". Kuya kufuneka icinezelwe kwaye oku kuya kubonisa iwindow entsha apho kukho izinto ezahlukeneyo ezivela kwiprofayile enje; igama lomsebenzisi, igama lomntu, inkcazo yeprofayili, ezinye iinkcukacha zeakhawunti, Njl
Into emayenziwe emva kwexesha ukuhlela igama lomsebenzisi, kukucinezela ku "username", oku kuya kuvumela umntu ukuba aliguqule igama lakhe, nje ukuba kubhalwe iqonga liza kuqala ukukhangela ukuba liyafumaneka na, ukuba kunjalo Kufuneka ucofe nje kwiqhosha "longa" kwaye yiyo loo nto, igama lomsebenzisi liya kutshintshwa.
Xa igama lomsebenzisi lingafumaneki, kuya kuvela u "x" ngombala obomvu ecaleni kwegama, umntu kufuneka alitshintshe kaninzi kangangoko efuna de afumane umsebenzisi ongasetyenziswa ngomnye umntu.
Igama eliza kusetyenziswa kufuneka likhethwe kakuhle, kuba wakuba litshintshiwe, Ayizukukwazi ukwenza olunye utshintsho kude kube ziintsuku ezingama-30 kamva.
1 Utshintsha njani igama lephrofayili kwiTikTok
1.1 Imiyalelo emayilandelwe ukwenza utshintsho lomsebenzisi kwiTikTok
Ungayitshintsha njani ifonti kuWhatsApp?